DIVYANKA TRIPATHI ခေတ်၊ အမြင့်၊ လင်ယောက်ျား၊ မိသားစု၊ - ဘောလီးဝုဒ်မင်းသမီး
Divyanka Tripathi ခေတ်၊ အမြင့်၊ လင်ယောက်ျား၊ မိသားစု၊
နာမည်အပြည့်အစုံ Divyanka T က Dahiya
ကျော်ကြားသောအခန်းကဏ္။ Ishita Bhalla 'Ye Hai Mohabbatein' ရုပ်သံလိုင်းတွင်ပါ။
လက်မအတွင်း ၅ '၅'
အလေးချိန် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ကီလိုဂရမ် ၆၅ ကီလိုဂရမ်
ပေါင်မှာ 143 ပေါင်
ပုံတိုင်းတာမှုများ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) 34-30-34
မွေးနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊
ကျောင်း ကရမေလခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကျောင်း၊ ဘိုပါးလ်
ကောလိပ် Sarojini Naidu အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ။ မိန်းကလေးများ P.G. (အော်တို။ ) ကောလိပ်, ဘိုပါးလ်
အချစ် တီဗီ Banoo ပင်မ Teri Dulhann (2006)
ရုပ်ရှင်။ Lala Hardaul (၂၀၁၂)
မိသားစု ဖခင် - Narendra Tripathi (ဆေးဝါးပညာရှင်)
အမေ - Neelam Tripathi
နှမ - Priyanka Tiwari (အသက်ကြီး)
အစ်ကို - Aishwarya Tripathi (လူငယ်၊ ရှေ့ပြေး)
ဝါသနာ စျေးဝယ်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း
ဆုများ, အောင်မြင်မှုများ 2007
• Emami Golden Skin ဆုအတွက်ရွှေဆု
အကောင်းဆုံးအခန်းကဏ္ in မှမင်းသမီးဆုအတွက်ရွှေဆု
အငြင်းပွားမှုများ •ရဲစခန်းသို့သူနှင့်နီးစပ်သူတ ဦး ဖြစ်သူ Ye Hai Mohabbatein နှင့်ချဉ်းကပ်လာပြီးအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းသည့်စကားများဖြင့်သူနှင့်အပြုအမှုစတင်ခဲ့သည်။
2017 ခုနှစ်တွင် Diyvanka နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း Vivek တို့သည် Nach Baliye ၈ စုံတွဲအခြေပြုအကပွဲအခမ်းအနားတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ အကဖျော်ဖြေပွဲအတွက်လေ့ကျင့်ရင်းသူမကိုယ်သူကိုယ်တိုင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ကြည့်ရှုသူအချို့မှဒဏ်ရာအတုကိုဝေဖန်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူမ၏ဒဏ်ရာအတုမဟုတ်ကြောင်း Verity သို့ဗီဒီယိုထုတ်ခဲ့သည်။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ Dal Baati Churma၊ ရေခဲမုန့်၊ ချောကလက်များ
အကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်တွေ Salman Khan က , အဆုံးမှာ Sood
အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင် ဘောလီဝုဒ်: Hum dil De Chuke Sanam, Lamhe
အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်များ Kailash kher , Shubha Mudgal, Enrique Iglesias , အဲလ်တန်ဂျွန်
အကြိုက်ဆုံးစာအုပ် P.S. ငါ Cecelia Ahern အားဖြင့်သင်တို့ကိုချစ်
အကြိုက်ဆုံးကံကြမ္မာ ကက်ရှမီးယား၊ မောရစ်ရှ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို
ရေးရာ / ရည်းစား Sharad malhotra (မင်းသား)
Vivek Dahiya (သရုပ်ဆောင်)
ခင်ပွန်း / ဇနီး Vivek Dahiya (မင်းသား)
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် 8 ဇူလိုင် 2016
လစာ ₹ ၁ သိန်း / ဇာတ်လမ်းတွဲ
Divyanka Tripathi နှင့် ပတ်သက်၍ လူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Divyanka Tripathi ဆေးလိပ်သောက်ပါသလား။ မဟုတ်ပါ
Divyanka Tripathi သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား
Divyanka သည်ငယ်စဉ်ကတည်းကသူမ၏ဇာတိမြို့ Bhopal တွင်ပြဇာတ်၊ ပြဇာတ်နှင့်တယ်လီဖုန်းရိုက်ချက်များတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
Divyanka Tripathi ၏ကလေးဘဝဓာတ်ပုံ
သူမကျောင်းတွင်ရှိစဉ်ကသူမသည်ပထမဆုံးအိန္ဒိယရေဒီယို (AIR) ကိုလက်ခံခဲ့ပြီး paid ၈၀၀ ပေးဆောင်ခဲ့သည်။
သူမငယ်ငယ်တုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံ Uttarakhand, Uttarkashi, Nehru တောင်တက် Uttarkashi မှတောင်တက်သင်တန်းတက်ခဲ့သည်။
သူမ၏ဖခင်ကသူမကို National Cadet Corps (NCC) တွင်ပါ ၀ င်စေလိုသည်။ သူမသည် Bhopal ရိုင်ဖယ်အကယ်ဒမီတွင်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ သူမသည်ရိုင်ဖယ်သေနတ်ပစ်ခတ်မှုတွင်ရွှေတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူမတစ် ဦး စစ်တပ်အရာရှိချုပ်ဖြစ်လိုခဲ့သည်။
Divyanka Tripathi - Bhopal ရိုင်ဖယ်အကယ်ဒမီ
သူမသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Miss Bhopal ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
သူမသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Indore 'The Zee Cine Star's Ki Khoj' အမဲလိုက်ပြပွဲတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
သူမရုန်းကန်နေရသောကာလများအတွင်း Bhopal မှမွန်ဘိုင်းအထိဘတ်စ်ကားတစ်စီးမှတစ်ဆင့်သူမ၏ဖခင်သည်သူမအားအတူတကွစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သူမသည် Doordarshan ၏နေ့စဉ်ဆပ်ပြာဖြင့်သူမ၏တီဗီလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
သူမသည်ဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ဘက် Zee တီဗီရဲ့အမှတ်စဉ် 'Banoo ပင်မ Teri Dulhann,' တွင်နှစ်ဆအခန်းကဏ္ with နှင့်အတူအိမ်ထောင်စုနာမည်ဖြစ်လာခဲ့သည် Sharad malhotra ။
သူမသည် IAS ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို Banoo Main Teri Dulhann တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ after မှရရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်သူမသည်သူမ၏မိဘများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်များစွာကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရသည်။
သူမသည်သက်သတ်လွတ်စားသူတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းသူမဟာရည်းစားဟောင်းဖြစ်သည့်အပြင်သူမသည်သက်သတ်လွတ်အစားအစာများကိုချက်ပြုတ်တတ်ခဲ့သည်။
Divyanka နှင့် Sharad တို့သည် ၉ နှစ်ကြာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။
သူမ၏အိပ်မက်၏အခန်းကဏ္roleမှာ 'ရဲအရာရှိ' သို့မဟုတ် 'ရဲအရာရှိ' ၏အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်ရန်ဖြစ်သည်။
သူမသည်မွန်ဘိုင်းရှိ Lokhandwala မှစျေး ၀ ယ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
သူမ၏အချစ်ဇာတ်လမ်းသည် Vivek Dahiya နှင့်အတူသူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှေ့ဆက်သွားရာတွင်အဓိကကျသည်။
2017 ခုနှစ်တွင်သူမသူမ၏ခင်ပွန်း Vivek Dahiya နှင့်အတူ '' 35 သိန်း၏ငွေသားဆုနှင့်အတူ 'Nach Baliye 8' 'ဖလားအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Divyanka Tripathi နှင့် Vivek Dahiya - Nach Baliye 8 ဆုရရှိသူများ
သူမသည် Nach Baliye 8 တွင်ဒဏ်ရာအတုသယ်ဆောင်မှုအတွက်လှည့်စားခံခဲ့ရသော်လည်းဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ခြင်းအားဖြင့်သူမသည်ဒဏ်ရာနောက်ကွယ်ရှိအမှန်တရားကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်အားဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းကိုတွေ့မြင်လိုသူများအတွက်အစမ်းလေ့ကျင့်ရန်အတွက် vid ။ #HonestHeart #HonestAction ? pic.twitter.com/mf02QHF79j
- Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) ပြီလ 26, 2017
သူမအားလပ်ချိန်များတွင်အထူးသဖြင့်မွန်ဘိုင်း၏ Lokhandwala fromရိယာမှစျေးဝယ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
vijaya nirmala ပထမခင်ပွန်းအမည်ပုံများ
vishwas nangare patil မိသားစုနောက်ခံ
ပေအတွက်ပေတရု dinklage အမြင့်
sachin tendulkar အိမ်သူအိမ်သားအတွင်းပိုင်းဗီဒီယို
ခြေထောက် aditi Bhatia အမြင့်
Nadia Ali porn ကြယ်ဝီကီ
အပြည့်အဝရုပ်ရှင်လို့ခေါ်ပါတယ် Hindi အတွက် allu arjun ရုပ်ရှင်